အေးမြတ်သူ တင်နေ တဲ့ သူ့ရဲ့ crush ဆိုတာဘယ်သူလဲ??? - Myanmarload
အေးမြတ်သူ တင်နေ တဲ့ သူ့ရဲ့ crush ဆိုတာဘယ်သူလဲ???
လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ် က 16:04 October 01, 2016
ရုပ်ရှင်မင်းသမီး အေးမြတ်သူ ဟာ သရုပ်ဆောင်တဲ့ နေရာမှာ အလွန်ကို တော်တဲ့သူပါ။ ယခုတလော ရုံတင်နေတဲ့ 'မအေးပွင့်မြင့်မြင့်စန်း လမ်းသုံးဆယ်' ရဲ့ ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးလဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ သူမရဲ့ instagram က လူမှုကွန်ရက် မှာ သူမရဲ့ crush (သူမ တစ်ဖတ်သက် ကြိုက်နှစ်သက်သူ)ဆိုပြီး တင်နေတဲ့ သူက ဘယ်သူလဲ?
မင်းသားမင်းသမီး သရုပ်ဆောင်တွေဟာ လူထဲက လူတွေ ဘဲဖြစ်တဲ့ အတွက် သူ တို့ မှာလဲ တစ်ဖက်သတ်ကြိုက်နှစ်သက်ရတဲ့သူဆိုတာ ရှိစမြဲပါ။ အေးမြတ်သူ ဟာ လဲ သူမ ရဲ့ အသည်း သူမရဲ့ crush ဆိုပြီး ရုပ်ဖြတ်ပြီး တင်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။
သူမဟာ ထိုသူ ရဲ့ မွေးနေ့ပွဲကို လဲ အထူးစပယ်ရှယ်လုပ်ပေးပြီး နှစ်တိုင်း အတူတူရှိနေချင်တယ်ဆိုတဲ့ စကားတွေလဲပြောထားပါတယ်။ ထိုသူဟာ သူမရဲ့ ရည်းစားလား? ဒါမှ မဟုတ် အေးမြတ်သူက ကြိတ်ပြီး ပိုးပန်းနေရတဲ့သူလား?
ထိုသူကို ရုပ်အမျိုးမျိုးဖြတ်ပြီး တင်နေ တယ်ဆိုပေမယ့် လဲ မျက်မှန်း တန်းမိ တဲ့ သူတွေ ရှိမှာပါ။ အကယ်၍ စာဖတ်ပရိသတ်တွေက မှတ်မိတယ်ဆိုရင် ပြောပြသွားအုံးနော် ဟီးဟီး....